Apple inotangisa yechitatu beta yemasisitimu anosvika mukuvhuvhu | IPhone nhau
Apple inotangisa yechitatu beta yeIOS 10, tvOS 10 uye watchOS 3
Ndinofanira kureurura kuti nhasi ndakabatwa zvachose. Apple yakatanga beta yechipiri yemashandisirwo ese anozosvika zviri pamutemo mukudonha muna Chikunguru 5 uye akazviita pazuva revhiki mune zvinowanzoita, neChipiri. Kana chinhu chine musoro chaive kufunga izvozvo chetatu beta yaizosvika mangwana, Apple yaenda kumberi pazuva uye yakavaburitsa nhasi zvakanyanya ku iOS 10Kana tvOS 10 uye wachiOS 3.
Panguva yekunyora, iyo beta yechitatu yeMacOS Sierra inoshayikwa, asi yaisazove kekutanga kuti Apple kuitisa zuva rese muNorth America, kureva kuti, apo iri muCupertino ichiri Muvhuro. Mune imwe yetatu betas yakatangwa pane ruzivo rwakawanda rwunopihwa kupfuura "bug fixes", asi kana takadzidza chimwe chinhu kubva kuWhatsApp mumwedzi yapfuura, ndeyekuti iyo update inofanirwa kusvika gadzirisa zvikanganiso inogona kusanganisira chinhu chinonyanya kukosha.
Beta yechitatu yeIOS 10 inosvika, inofungidzirwa, kugadzirisa zvikanganiso
Tichifunga nezve mavhezheni ekutanga ehurongwa hwekushandisa hwakaburitswa munguva yakapfuura, hapana munhu anotenda kuti shanduro nyowani dzinoburitswa zvega uye kugadzirisa zvikanganiso. Apple, senge chero mumwe mugadziri, inoshandisa aya mabheta kuunza marudzi ese eshanduko, sekushandura mhando yefonti kana chimwe chiratidzo, saka tinotarisira kuwana nhau dzakakosha.
Parizvino zvishoma zvinonakidza zvawanikwa asi, semuenzaniso, zvinozivikanwa kuti tinogona kukumbira Siri kuti amutse iyo yakasviba modhi muTVOS 10 beta 3. Sezvenguva dzose, kana iwe ukaisa imwe yeshanduro nyowani uye ukawana chimwe chinhu chinonakidza, usadaro kuzeza kusiya zvaunowana mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Apple inotangisa yechitatu beta yeIOS 10, tvOS 10 uye watchOS 3
Alvaro Pedrajas Estrada akadaro
Pablo wechitatu beta yeIOS ndinofunga ichave yevanogadzira, handiti?
Pindura kuna Alvaro Pedrajas Estrada
Alvaro Estrada chinobata mufananidzo akadaro
Pablo wechitatu beta yeIOS 10 ndinofungidzira ichave yevanogadzira, handiti? veruzhinji betas vanowanzo kwira kuenda beta 2..3…?
Pindura kuna Alvaro Estrada
Veruzhinjiwo vane anopfuura anopfuura 1 vhezheni, asi nhau dzinotaura nezve ivo vanogadzira.
Ini ndakagadzirisa iyo iPhone pasina matambudziko, asi iyo yekuvandudza haina kusvetuka paWatch. Ndichaedza zvakare mangwana kuti ndione ...
Ok ndatenda Luis 😉 Ndiri neruzhinji beta1 uye chokwadi ndechekuti zviri kufamba zvakanaka!
Mhoro Alvaro. Sekukuudza kwaLuis, hongu, yeruzhinji beta yakavhurwa ichienderana neyechipiri yevagadziri mavhiki maviri apfuura
Mhoro! Ini ndangokwidziridzwa ku beta 3 yauri kutaura nezvayo pano, uye ndinoda kudzokera kubeta 1. Inogona kuvandudzwa kuburikidza neTunes? Kana iwe uchafanirwa kudzoreredza sekunge wadzokera kune yapfuura vhezheni? Iwe unoziva kana yeruzhinji beta 1 yakafanana neyekuvandudza beta 1 kana iri kunyanya kunge beta 2? Ndo iyo vidyo app! Izvo zvinongondishandira mu beta 1. Ndatenda zvese
Kana iwe watove wakakwidziridza, iwe unogona chete kugara mugadziri beta 3 kana kuenda kuruzhinji beta nekubvisa iyo yekuvandudza purofesa, kudzorera muIOS 9.3.3, uyezve nekuisa yeruzhinji beta.
Pablo, ndigadzirise kana ndakanganisa asi ndinofunga kuti ndinorangarira kuti mumabheta eeshanduro dzakapfuura vaigara vachibuda chero Muvhuro wega wega ... asi nguva dzose Muvhuro kunze kwekunge zvave kunonoka (kuti kana, kubva na19.00: XNUMX p.m. nguva dzose)
Mhoro Hector. Ivo vanowanzoburitswa Muvhuro kana Chipiri, asi ini ndinorangarira Chipiri kupfuura Muvhuro. Keynote inowanzo kuve Muvhuro uye iro zuva zvakare rinowanzo beta, asi semuenzaniso, beta 2 yaive neChipiri.
Ichokwadi, ndakabatanidzwa hehe. Nenzira, wechitatu beta ye macOS Sierra yakatobuda 🙂
Emeth Paredes akadaro
Ichi chaive chiitiko ichi zvakare cheRuzhinji Beta? Iyo yekuvandudza haina kuoneka kubvira nezuro.
Pindura Emeth Paredes
Hi Emeth. Beta yeruzhinji inowanikwa kubva kune yapfuura uye ingangove kusvika kune yekupedzisira (pamwe, yekupedzisira yezvose ndeye GM, chete kune vanogadzira).
Zvanga zviri zvandaifungidzira asi kusvika maminetsi gumi apfuura iyo gadziriso yakabuda! Nenzira, kwaziso dzinobva kuMexico! Rakanaka peji
Hi Emeth. Ndakakanganisa. Izvo zvinowanzoitika ndezvekuti ivo vanovhura vese panguva imwe chete, asi veruzhinji vekutanga (zvakaenzana neyechipiri kune vanogadzira) yakavhurwa neChina. Yechipiri (yakaenzana neyechitatu kune vanogadzira) yaburitswa nhasi. Kana ini ndisina kukanganisa zvakare, kubva kune inotevera beta ivo vachaburitswa zuva rimwe chetero.
Apple inoburitsa vhezheni yekupedzisira yeIOS 9.3.3 kugadzirisa tudiki tudiki nekuvandudza mashandiro
Zvitanhatu zvikanganiso zvaungave uchiita kana uchitamba Pokémon GO